Ngo Cherek esifundeni Kabardino-Balkaria phakathi Amawa Wabuthalala emangalisayo izikhumbuzo yemvelo - ezinhlanu blue amachibi of Karst imvelaphi. Ngamunye amadamu kugcina imfihlo, eye ayitholakalanga umkhondo indoda namuhla. Le ukhangwa itholakala amakhilomitha 60 kusuka Nalchik, ngakho amachibi blue babonwa ezivakashelwa kakhulu yizivakashi futhi bendawo endaweni.
Ngokwe-legend, nasemanzini aluhlaza ngokuthi Abavakashi owabulala an amazing umbala amanzi. Ngemva lapha baye baqala ukuqoqa abantu abavela emagumbini ezahlukene zomhlaba, kodwa akuzona zonke ezivumayo enegama amachibi. Abanye babheka green, blue, Emerald ... It kuvela, amachibi blue avele yonke inkazimulo yabo kuphela usuku ezolile futhi libalele, futhi ngosuku bangakwazi uyoshintshwa mayelana 16 izikhathi, ukuthatha ezihlukile.
Hlukanisa Lower Lake, ngokuthi abendawo Tserik-Kelemen, futhi Upper: eMpumalanga naseNtshonalanga - Imfihlo futhi yomile ngokulandelana. Inzalo enkulu ngaso sonke isikhathi umzimba lokuqala amanzi: amanga ayo imfihlo yokuthi angawi, akukho emfuleni noma ukusakaza, kodwa nsuku zonke ubuchitha abantu abangaba yizigidi ezingu-70 amalitha amanzi, kanye ezingeni uphawu ukujula awushintshanga. Ngaphezu kwalokho, Akwaziwa ukujula ngqo Tserik-Kel, ngoba akekho wehla kakhulu phansi, ngisho Jacques Cousteau akazange babhekane nalesi msebenzi. Eminye imithombo kuboniswe sibalo - 386 m, kodwa abaningi aphonse enye 100 m.
Blue Lake portyasayuschey elihlobene ne-legend: edlule emakhulwini amaningi ahlala kulezi zingxenye ngegama hero Bataraz. Kanye isiphetho uhlaselwe dragon esabekayo, kodwa hero elinesibindi wehla naye, waya duel abehlula. Iwelephi silo, wakha ukwehluleka ngokungazelelwe lolo wawugcwalisa ngamanzi. Ithi, udrako, futhi kuze kube namuhla, phansi echibini, ukugcwalisa ngezinyembezi zakhe, nokukhuluma iphunga fetid. By endleleni, uma uhamba ogwini Tserik-Kel, ungaziqhenya iphunga-hydrogen sulfide.
Uma ukukhuphuka rocks ke endleleni ukuhlangabezana phezulu echibini blue. Ababona ezijulile, kodwa Kule ndawo kuhlala ngumuntu omkhulu. EMpumalanga naseNtshonalanga amadamu zixhunywe umzila odlulela, ngakho amanzi ageleza esuka omunye komunye. Budebuduze kubo itholakala Imfihlo Lake, igama ke wathola ngenxa ekusithekeni. Kuyinto echibini ku sinkholes, ezinabantu igcwele notshani utshani obude, sizungezwe ihlathi beech, ngakho uma ungazi indawo esiqondile, ungaya ekhoneni hhayi abasebasha bebona lesi simangaliso bemvelo.
Wesihlanu namachibi libizwa ezomile, walibumba in a deep kakhulu izimbobo Karst, okuyinto emakhulwini eminyaka adlule yayisigcwele ngamanzi. Kwabe sekwenzeka okuthile, mhlawumbe ukuzamazama komhlaba ngo-izintaba, ichibi is wanyamalala cishe ngokuphelele, kusale kuphela ukwehluleka phansi kakhulu. Ngokusho kwezinye izinguqulo amanzi nje agelezela Tserik-Kehl.
Phumula echibini blue recharges nge imizwelo eyakhayo ivumela yobumfihlo sizungezwe nemvelo, uzizwa charm yayo, nokuhlanzeka nobuhle. Budebuduze ezikhangayo kukhona amamotheli eziningi namahhotela, lapho ungahlala. Kasibili zonke izivakashi owamukelwa ngezandla ezifudumele Kabardino-Balkaria. Blue Lake izivakashi eziningi nge imfihlakalo yayo nezindawo ezinhle kakhulu.
Indawo enhle kakhulu eRussia. Lamadolobha amahle yeRussia. Izindawo ezinhle kakhulu eRussia: nemvelo
Kwethempeli likaZeus futhi metopes yayo
Piacenza, Italy: nokuzwa, umlando ezithakazelisayo amaqiniso
Izikhangibavakashi Socotra Island. Likuphi esiqhingini Socotra?
Hohenschwangau Castle. Castle eBavaria, eJalimane
MP Nadezhda Maximova: Biography emfushane
Valeria Lanskaya - Biography, Filmography, izithombe kanye nomndeni
Innovations Ezokwelapha. ubuchwepheshe ezintsha kwezokwelapha
Amaphupho ezinwele: incazelo nencazelo
Visa eya e-Italy: yini okudingeka ukwazi ukuthi uyithole
Golden 5 Sapphire Suites Ihhotela de india 4 * (Hurghada, Egypt): ngezibuyekezo nezithombe, incazelo
Malek izinhlanzi: komqondo nezinga lokukhula kwengane
Motor ngohlelo: design futhi ama-apharathasi
Funda ukuthi iphupho ... eyisihlobo oshonile